TV OROMIYAA – YEROOBLOG
Tag: TV OROMIYAA
Guddina Afaan Oromootiif Gaheen Miidiyaa Guddaadha!
Afaan Oromoo baroota hedduudhaaf afaan miidiyaa osoo hinta’iin tureera. ‘Afaan Oromoo raadiyooAfaan Oromoo raadiyoocabsa’ jedhamees warra nafxeenyootaatiin itti qoosamas tureera. Amma garuu qabsoo fi aarsaa goototni Oromoo kaffalaniin, Afaan Oromoo afaan hojii, afaan barumsa, afaan miidiyaa, afaan saayinsii fi teknoolojii ta’uu danda’eera.
Yeroo amma kanatti, hacuuccaa fi dhiibbaan adda addaa itti bayyatus haala daran nama gammachiisuun Afaan keenya guddachaa jira.
Hogbarruuleen hedduun Afaan Oromootiin barreeffamanii gabaa irra oolaa jiru. Miidiyaaleen Afaan Oromootiin tamsaasan suuta suuta mula’achaas jiru. Dhaabilleen Raadiyoo Afaan Oromootiin tamsaasan hedduu dha. Akkasumas dhaabbileen Televiziiyoonaas, tattaaffi ijoolleen Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa gochaa jiraaniin, mula’achuu jalqabaniiru. TV Oromiyaa, OBS TV, Oromia Media Network fi Oromo TVn dhaabbilee televiziyona guddina fi dagaagina Afaan Oromootiif bu’aa guddaa buusa jiranidha.
Dhaabbileen kunniin aadaa, seenaa fi dudhaa keenya nubarsiisu, nu bashanasiisu, Oromoota kaabaa-kibbaa, bahaa- dhihaa walbarsiisu, rakkinnia uummata Oromoorra gahaa jiru fi qabsoon Oromoo maal irra akka jiruu nutti agarsiisu. Garuu, uummata Oromoo miliyoona afurtamatti shalagamuuf kunneen ammas gahaa miti. Gaazeexaa hedduu, raadiyoo hedduu, televizziyoona hedduu nabarbaachisa.
Kan harkaa qabnu jabeessinee qabachaa, dabalataaf immoo hojjechuu fi qabsaa’uun nurraatii eegama. Kanneen miidiyaa Afaan Oromootiin hojjettu dhaabuuf qabsooftan fi aarsaa kafaltan hundi galata guddaa nurraa qabdu!!
Yerooblog	Freedom of Expression	Leave a comment October 28, 2015 October 28, 2015 1 Minute